ô.cc – Hoyga
URL gaagaaban si qarsoodi ah
. 1 saac1 maalin1 toddobaad1 bishii1 sanadka
Waxaa loo dhisay dadka
ô.cc waa URL-ga aan la garanayn ee loo yaqaan 'redirector redirector'. U gudbiya xiriiriyeyaashaada si fudud, ugu dhex dar barnaamijkaaga. Istaatiitik aan lahayn, diiwaano la'aan Sirtaada waa amaan.
Maxaan ugu baahanahay inaan qariyo oo gaabiyo URL-ga?
ô.cc waxay kordhin doontaa asturnaantaada adoo u isticmaalaya tixraac maran (qoraferer) dhammaan xiriirada aad bixisid. Waxaa intaa dheer, waxay yareyn doontaa xiriirintaada, taasoo sahleysa in la wadaago warbaahinta bulshada iyo aalad kale oo wadaag ah. Waxaad awood u yeelan kartaa inaad dayactirto url kuu gaar ah oo cayiman waqti dhicitaan. Sababta oo ah waxay kaydineysaa xiriidhada aad rabto inaad toos u xajiso, waxay kuu ogolaaneysaa inaad soo gaabin karto url bilaash ah.
Waa maxay af-hayeenku?
Caqli-bixiyuhu waa farsamo lagu beddelo adeegsadaha URL gaar ah oo laga helo websaydhka. Guud ahaan, bog furayaasha internetka waxay soo diraan wargelinno (oo ay kujiraan afti) inta aad ku jiheysid bog kale. Doorka degganaantu waa in lagu qariyo / laga saaro macluumaadkaas websaydhka ku xidhan. Haddii maamulaha webku doonayo inuu falanqeeyo diiwaannada websaydhkiisa, waxay soo bandhigi doontaa URL ka-deggeeda halkii URL hore.
1. Ku dhaji ama ku qor URL-gaaga galinta.
2. Gali magac caadadiisu (ikhtiyaari)
3. Gali taariikhda uu dhacayo caadada (ikhtiyaari).
4. Guji gaabin.
Markaa waxaad heli doontaa URL cusub oo aad la wadaagi karto oo aad isticmaali karto!
Sidee loogu dhex daraa codsigeyga?
Si fudud u isticmaal url-ga https: //ô.cc/? oo ku dar url-kaaga asalka ah.
Sidee loo gaabin karaa URL-yada si dhakhso leh?
Waad gaabin kartaa oo aad qarsoodi kartaa URL-ka runtiina si dhakhso badan waana wax fudud.
- Waxaad ku dari kartaa buug-yarahaan soo socda meesha aad ugu jeceshahay.
- U gudub bogga aad rabto inaad gaabinayso
- Guji halka aad dooratay ka.k.cc ee aad adigu abuuray
Jiid oo hoos u dhig buug-yarahagaaga barbar-gelintaada si aad si otomaatik ah u abuurto url aad uyar inta aad ku dhex soconaysid badhanka fududahay.
Faahfaahin dheeraad ah!
Waa maxay sababta aad u gaabinaysid oo aadan u aqoonsanayn xiriiriyeyaashaada?
Ereyga URL gaabinaaya ayaa inagu xeeran waqti dheer hadda. Waxaan xitaa laga yaabaa inaanan garan doonin jiritaanka. Laakiin waxay ku dhowdahay meel kasta oo internetka ah. Sababta ugu horreysa ee loo gaabinayo xiriirada ayaa ah in ay fududahay in la xasuusto dadka laga yaabo inay raadinayaan websaydhkaas internetka. Ka soo qaad inaad xiriir ku leedahay shabakadaada ama xiriirin ku saabsan waxa ka kooban websaydhkaaga ee URL-ka aad ayuu u weyn yahay sidoo kale looma oran karo hadal ahaan.
Ka soo qaad https://example.com/5dc1apgeniune waxaad laga yaabaa inaad aragtay noocan oo kale ah URL-ka markaad helayso xiriiriye koobi ka sameysan karo shaashadda qalabkaaga. Horey ayaad u garan kartaa inaadan awood u lahayn inaad ugu sheegto xiriirinta farriin rasmi ah qofna.
Kaas oo kaa horjoogsanaya in tallaabada ugu horreysa ee suuqgeynta lagu faafiyo baraha bulshada. Taasina waa runtii sababtayda aasaasiga ah ee URL-ga oo ah inaad ka heli karto awood aad ku yeelato saaxiib hadal afka ah iyo sidoo kale fududahay inaad aqriso xiriirika oo aad si fudud u qori kartid oo aad si fudud u wadaagi karto. Tilmaamaha midaysan ee loo yaqaan yunifoomka ayaa sidoo kale loo yaqaannaa URL inuu jidh ahaan u yahay goob cayiman oo laga helo adduunka oo dhan.
Geedi socodka URL gaabinta wuxuu u shaqeeyaa si ay awood u leedahay yareynta tirada jilayaasha isku xirka laakiin wali awood u leh inay ku hagto adeegsadayaasha isla qodobadaas saxda ah.
Markii aad ka helayso URL weyn hortiinna way kugu adag tahay inaad soo xusuusato qaybta oo dhan. Xaaladdan oo kale URL gareeyaa wuxuu kuu shaqeeyaa si aad u yareyso jilayaasha URLka laakiin weli waxay awood u siineysaa inuu kugu jiheeyo isla isla hal nuqul.
Markaad sidan sameyso waxaad sameyneysaa qaab kaheli badan oo URL-ka hortiis ah kaas oo kuu sahlanaan doona inaad xasuusto oo ay fududaato inaad wax qorto ama wadaagto. Dusha sare ee URL gaabin ayaa sidoo kale leh awooda iskuxirka dhowr websaydh ama dhowr bog oo hal bog ah.
Sababta ugu weyn ee ka dambaysa soo gaabinista URL waa in ay u muuqato mid hagaagsan oo waliba ay fududdahay oo aan nooc khalad ah lahayn awood u leh in lala wadaago adeegyada farriimaha tooska ah. Waxay sidoo kale leedahay qaar ka mid ah faa'iidooyinka amniga ee ilaalinta goobta iyo macluumaadka sidoo kale waxay ka dhigtaa xayawaan xagga nooc kasta oo waxyeello ah oo la gaari karo. Soo gaabinista URL ayaa sidoo kale fududaynaysa abuuritaanka mashiinka raadinta kobcinta ku habboon ee ku habboon internetka.
Ka soo qaad inaad haysatid degel baloog halkaasoo aad ka abuurinayso xayeysiin loogu talagalay adeegyo kaladuwan halkaas oo aad ku wadaagi doontid xiriiriyeyaal kala duwan. Adigoo isticmaalaya URL gaagaaban waxaad si fudud u bixin kartaa gaaban iyo noocyo URL oo waxaad ku dari kartaa furayaasha muhiimka ah si dadku ay si fudud awood ugu yeeshaan inay raadiyaan waxa ku jira sidoo kalena si sahal ah ayaa looga saari karaa gorfaynta Google.
Maaddaama ay u fududaaneyso xiriirada in lala wadaago isticmaaleyaasha ayaa si fudud awood ugu leh inay la falgalaan higgaadda iyo sidoo kale in si fudud loo xasuusto. Adeegga gaabinta URL wuxuu kaloo ka caawiyaa aaminaadda macaamiisha websaydhkaaga. Sababta ugu weyni waxay tahay iyadoo URL gaabinaayo waxaad heleysaa URL saaxiibtinimo aqrin leh kaasoo sidoo kale si wanaagsan ugu socda tijaabada aqrinta ee waxyaabaha kujira internetka. Markay tahay quseeya qoraal hoosaadyada ama daabacadaha waxaad sidoo kale fursad u heli kartaa inaad isku xirkaaga ka dhigto mid nadiif ah intii suurogal ah si loo arki karo illaa iyo inta la aamini karo ee ay u sii jiheyn karto macaamiisha imaan kara.
URL gaabis ah oo gaabinaaya
URL noocan ah asal ahaan waa kan aad adeegsan jirtay si aad u bixiso adeeg sahamin ee websaydhkaaga adigoon raadraacin faahfaahintaada saxda ah ama faahfaahinta qofka qaadanaya daraasadda. Noocan 'hyperlink' noocan oo kale ah ayaa si fudud loogu dhejin karaa emaylka ama xitaa daaqadda pop-up ee websaydhkaaga ama xitaa bogga degitaanka. Isticmaalka URL aan la aqoon ayaa ka caawinaya milkiilaha websaydhka bixinta shabakad saaxiibtinimo oo aamin ah oo qarsoodi ah si isticmaaleyaashu u awoodaan inay daraasad ku sameeyaan waxa ku jira iyo sidoo kale si fudud si loo go'aamiyo tayada guud ee websaydhka.
Oo asal ahaan waxay ka caawisaa nooc kasta oo dhowr ah waxyaabo kale oo waxyeello leh oo internetka ah. Sida marka aad ku dhejineyso iskuxirka websaydhkaaga nooc kasta oo ka mid ah waxyaabaha xayeysiinta ah markaa waxay aad ugu dhowdahay in waxyaabahaaga iyo meesha saxda ah ee ay ka kooban tahay shabakadaada si sahal ah loo raadin karo sidoo kalena waa la qaddarin karaa ereyo ficil waxyeelo leh. Halka dhinaca kale adoo adeegsanaya qarsoodi iyo gaaban iyo nooca URL-ka dhabta ah waxay ku siin doontaa lakab dheeri ah oo asturnaanta waxayna sidoo kale kaa caawin doontaa inaad ilaaliso waxyaabahaaga ilaa xad weyn.
Waxay u tahay wax weyn dadka doonaya inay rakibto oo URL-ka u wareejiso waxyaabaha xayeysiinta ah. Waxaa jira dhowr adeegyo URL gaabin oo internetka ah oo awood u leh inuu URL-gu ka dhigo mid qarsoodi ah iyo waliba saaxiibtinimo akhrin kara.
Qaababka loo gaabiyo URL asal ahaan waxay raacdaa farsamooyinka http redirect. Tan waxaa loo isticmaali karaa soo gaabin iyo sameynta qaab qarsoodi ah ee websaydhka ama xitaa cinwaanka IP. Qaabkani wuxuu si fudud u gaabin karaa ama hoos ugu dhigi karaa oo u beddeli karaa qaar ka mid ah jilayaasha URL dheer oo awood u leh samaynta gaaban iyo nooca ayaa sidoo kale sii hayn doona goobta saxda ah ee websaydhka adduunka oo dhan.
© 2022 ô.cc • All Rights ReservedXiriirQaanuunka Arrimaha Khaaska ah